Momba anay - Xuzhou VYT Machinary Technology CO., Ltd.
Xuzhou VYT Masinina Teknolojia Co., Ltd.
Xuzhou VYT Masinina sy Teknolojia Co., Ltd. dia nanamboatra milina ho an'ny famokarana FIBC efa an-taonany maro, Tsy ho an'ny milina ihany, mandray anjara lalina amin'ny indostria ary manome serivisy matihanina manam-pahaizana koa ao anatin'izany ny vahaolana teknika, ny fisafidianana modely, ny fakan-kevitra ara-teknika ary ny teknika fanavaozana. Androany, mpanjifa maro any amin'ny firenena mihoatra ny 30 manerana ny tany no afa-po amin'ny kalitao sy ny fahamendrehan'ny vokatra sy serivisinay. Anisan'izany ny mpanamboatra manerantany FIBC (kitapo lehibe, kitapo fitoeran-kitapo, kitapo jumbo) milina fanapahana, fanapahana ultrasonika ary rafitra fanangonana mandeha ho azy. Izahay dia kendrena hamolavola sy hanamboarana ny milina mifandraika amin'ny FIBC, natao manokana sy noforonina ho an'ny fitaovana fanampiana FIBC fanampiny sy aoriana.
Androany, mpanjifa maro eran'izao tontolo izao, no afa-po amin'ny kalitao sy ny fahamendrehana ny serivisy sy ny vokatra. Miorina amin'ny traikefa maharitra sy fahalalantsika, manolotra ny teknolojia ho an'ny mpanjifantsika izahay amin'ny fanombohana na fanitarana ny lamin'ny famokarana mba hahatratrarana ny andrasan'ny tsena ary koa ny tetik'asa turnkey sy ny fanao. Ny tanjonay dia ny hanatsara ny serivisinay sy ny vokatra isan-karazany. manome fahafaham-po ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny fanarahana ny teknolojia vaovao sy ny filan'ny tsena.
Miaraka amin'ny fanohanana matanjaka ara-teknika, fitaovana fanodinana mandroso, fitantanana ara-tsiansa tonga lafatra, amin'ny alàlan'ny fampidirana tsy tapaka sy ny fandraisana ny teknolojia mandroso avy any ivelany, ampiarahina amin'ny traikefa fanamboarana mekanika nandritra ny taona maro, novolavolainay ny fitaovana famokarana vokatra vita amin'ny plastika fitoeran'entana. . Maka fomba fampitana vaovao izahay, izay afaka manapaka lamba varingarina sy lamba sosona tokana. Tsy hampiasaina izy io satria malefaka loatra ilay lamba na miraikitra amin'ny antsy. Izy io dia afaka mampihena ny vidin'ny famokarana ary manatsara ny tombotsoanao. Amin'ny alàlan'ny famokarana mekanika dia mamolavola ny andiam-bokatra vita amin'ny plastika izahay.
Nanjary orinasan-tsolika milina kitapo jumbo hajaina manana fahaiza-manao R&D tsy miankina, vokatra avo lenta ary serivisy premium izahay. Afaka manome vahaolana iray manontolo ho an'ny karazana fanaovana FIBC izahay. Raisinay ny serivisy milina natokana ho azy, avelao isika hanatsara ny tenantsika sy hianatra, hampiroborobo bebe kokoa ny teknolojia, "Customer Customer, Develop Together" no fotokevitra miorim-paka ao am-pon'ny olona tsirairay. Miaraka amin'ny fitarihan'ny fitsipika, dia mahazo fankatoavana lehibe avy amin'ny mpanjifa anatiny sy iraisam-pirenena izahay.
Matihanina momba ny milina fanapahana Ultrasonic, milina fanaovana kitapo jumbo sns. Manondrana ny vokatray any amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 50 toa ny Moyen Orient, Rosia, Azia atsimo atsinanana ary Afrika izahay. Ny vokatra sy ny serivisinay dia manana laza tsara eran'izao tontolo izao, koa manitatra ny tobin'ny mpanjifanay. Amin'ny ho avy dia hanangana sampana eto Vietnam sy Nizeria izahay, afaka manao tsara kokoa sy tsara kokoa amin'ny indostrian'ny milina fanaovana kitapo jumbo.
Miaraka amin'ny ezaka tsy tapaka, manana teknolojia avo lenta isika ankehitriny, fitaovana tena tsara, teknolojia mandroso ary koa rafitra fiarovana antoka kalitao henjana. Mandritra izany fotoana izany dia orinasa vahaolana milina kitapo jumbo hajaina manana fahaleovan-tena R&D, vokatra avo lenta ary serivisy premium izahay.
Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka, nanokana ny tenanay tamin'ny indostrian'ny milina izahay. Miaraka amin'ny fahalalantsika fanodinana manankarena dia manatsara hatrany ny milina izahay amin'ny indostria mety isan'andro. Na inona na inona milina vaovao novolavolainay dia manandrana milina ao amin'ny orinasa mpamokatra izahay, aorian'ny fitsapana mahafa-po dia mampahafantatra ny tsena.
Fahaiza-manao fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina, vokatra avo lenta ary serivisy kalitao.
Ny milina VYT dia manome serivisy ho an'ny mpanjifany, ho an'ny vahaolana ara-barotra tsara kokoa.
Ny orinasanay manokana dia mifehy tsara ny dingana rehetra amin'ny famokarana, ny kalitao fanaraha-maso tsara kokoa sy ny fotoana fandefasana.
Ny marika VYT dia mpiara-miombon'antoka manan-danja amin'ny mpamokatra maro, mpandraharaha injeniera ary mpamatsy fitaovana.
"Ny kalitao avo indrindra, ny vidiny mirary ary ny serivisy aorian'ny fivarotana" no foto-kevitray, "Fahafaham-pon'ny mpanjifa" no tanjontsika mandrakizay; ny vokatrao dia ekena tsara tsy amin'ny tsena anatiny ihany fa koa amin'ny tsena maneran-tany maro manerantany.
Orinasa tanora sy mavitrika, mpiasa ao amin'ny orinasa natokana hanomezana vokatra voalohany ho an'ny mpiara-monina, serivisy kilasy voalohany, mino izahay fa ho tsara kokoa sy ho tsara kokoa ny VYT, ny fangatahan'ny mpanjifa no motera tsy an-kijanona hanatsara, ny fanohanan'ny mpanjifa. ary ny fanamafisana no lasantsy hivoarantsika!